ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် LPP ကျဆင်းခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ အရာအားလုံးသည်မော်ဒယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည် (Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak အပေါ်သုံးသပ်ချက်၊ ၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် LPP လျော့နည်းခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ အရာအားလုံးသည်မော်ဒယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည် (Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak အပေါ်သုံးသပ်ချက်၊ ၂၀၁၅)
ဒီမှာ DOWNLOAD PDF ဖိုင်ရယူရန်
Biol Psychol ။ 2016 မေလ 24။ pii: S0301-0511 (16) 30182-X ကို။ Doi: 10.1016 / j.biopsycho.2016.05.003 ။
1တွက်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် San Diego မှ, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် Swartz ကိုရေးစင်တာ; စိတ်ပညာ၏ Institute မှ, သိပ္ပံ၏ပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, ပိုလန်။ အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အင်တာနက်နည်းပညာသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့်အမည်မသိအသုံးပြုခွင့်ပေးသည် (Cooper, 1998) ။ ရရှိနိုင်သောအချက်အလက်များအရအမျိုးသား ၆၇.၆% နှင့်ဒိန်းမတ်လူငယ်အရွယ် ၁၈.၃% (အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်အထိ) သည်အပတ်စဉ်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုကြသည် (Hald, 67.6) ။ ယူအက်စ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအနက်ယောက်ျားလေးများ၏ ၉၃.၂% နှင့်မိန်းကလေး ၆၂.၁% သည်အသက် ၁၈ နှစ်မတိုင်မီအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုကြသည်။ (Sabina, Wolak, & Finkelhor, 18.3) အသုံးပြုသူအများစုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ဖျော်ဖြေရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတွင်အခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည် (Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen, & Baughman, 18) (Häggström-Nordin, Tydén, Hanson, & Larsson, 30), မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည်ဆင်းရဲဒုက္ခ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည် (Cooper et al, 2006 အရသုံးစွဲသူ ၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) သည်ကုသမှုခံယူရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာသည် (Delmonico and Carnes, 93.2; Kraus, Potenza, Martino, & Grant, 62.1); Gola, Lewczuk, & Skorko, 18; Gola နှင့် Potenza, 2008) ။ လူကြိုက်များမှုနှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောလက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မီဒီယာများတွင်အထူးဂရုပြုမှုများစွာရရှိခြင်းသည်အရေးကြီးသောလူမှုရေးပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာ - နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် - McQueen မှ“ Shame” နှင့် Gordon-Levitt မှ“ Don Jon” နှင့်) မှဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးသမားများ (ဥပမာ၊ ယူကေ ၀ န်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်၏ကလေးတွေညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သော ၂၀၁၃ ခုနှစ်မိန့်ခွန်း) နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသန (Steele, Staley, Fong, & Prause, 2014; Kühn and Gallinat, 2009; Voon et al ။ , 8) ။ အများဆုံးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများမှာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်စွဲလမ်းနိုင်မလား။
ဇွန်လဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစိတ်ပညာထုတ်ဝေသော Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak (2015) ၏တွေ့ရှိချက်သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ သုတေသီများကပြသနာများသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ (N = ၅၅)၊1 ထိန်းချုပ်မှု၏တုံ့ပြန်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ - (အရေးပါမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိတ်ဆိတ်နှင့်ဆက်စပ် EEG အချက်ပြအတွင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု related အလားအလာ LPP) အနိမ့်အနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာပြ။ သူတို့ကအစအဆင့်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဘို့အသေးငယ် LPP ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်ပြသပါ။ (196 စ။ ) "ရလဒ်များကို၏ဤပုံစံစွဲမော်ဒယ်များဖွငျ့အခြို့သောဟောကိန်းများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပုံပေါ်" နှင့်ဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်၌ဤကောက်ချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်: အဆိုပါစာရေးဆရာကြောင်းကောက်ချက်ချ "ပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation "porn စွဲ" "။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ရဲ့ဆောင်းပါး, Prause et al ။ (2015) အတိအလင်းသူတို့စမ်းသပ်ခဲ့စွဲလမ်း၏မော်ဒယ်သတ်မှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အများဆုံးထူထောင်ထားသောမော်ဒယ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ စဉ်းစားသောအခါတင်ပြသောရလဒ်များသည်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစစ်ဆေးခြင်းမပေးနိုင်ပါ။ (Incentive Salience သီအိုရီ၊ Robinson and Berridge, 1993; Robinson, Fischer, Ahuja, Lesser, & Maniates, 2015) သို့မဟုတ် (Reward Deficiency Syndrome ၏ဖြစ်ရပ်ကဲ့သို့; Blum et al, 1996; 1996; ။ 2015; Blum, Badgaiyan, & ရွှေ, XNUMX) ဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ အောက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်။
စာပေးစာယူလိပ်စာ: Swartz ကိုတွက်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံစင်တာ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် 9500 Gilman Drive ကို, San Diego မှ,, CA 92093-0559, USA ။ အီးမေးလိပ်စာ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
1 မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ arousal နှင့် valence ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ ratings လိင်အကြားသိသိသာသာကွာခြားကြောင်းပြသနေစဉ်ဒါဟာ (။ : Wierzba et al, 2015 ကိုကြည့်ပါ) အတူတကွယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုများအတွက်စာရေးဆရာများပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုကိုသတိပြုမိဖို့ထိုက်
2 ဤသည်မှန်းဆကိုးကား Prause et al များတွင်အသုံးပြုအချက်ကိုကထောက်ခံသည်။ (2015) ကိုလည်းဆိုလိုသည်မှာWölfling et al (IST ရည်ညွှန်း။ , 2011
စာရေးသူအားဖြင့်ဝေါဟာရကို "cue-reactivity ကို" ၏မျိုးစုံအသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကရေးသားသူ Robinson နဲ့ Berridge (။ , ရော်ဘင်ဆင် et al, 2012 Berridge, 2015) ကအဆိုပြုထားသောစိတ်ကိုအခွင့်အရေး Salience သီအိုရီ (IST) တွင်ရှိသည်ခန့်မှန်းပေမည်။2 ဤသီအိုရီဆိုင်ရာအခြေခံ - လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအခြေခံအပြုအမူနှစ်ခုကို -“ လိုသော” နှင့်“ အကြိုက်” ခွဲခြားသည်။ ယခင်ရရှိသောဆုသည်မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအများအားဖြင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သည်။ Pavlovian သင်ယူမှု၏စည်းကမ်းချက်များအရဆုလာဘ်သည်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (UCS) ဖြစ်ပြီးသင်ယူမှုမှတစ်ဆင့်ထိုဆုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များသည်အခြေအနေကိုလှုံ့ဆော်ပေးသော (CS) များဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ထားသော CS များသည်မက်လုံးများလွန်းခြင်းနှင့်“ လိုချင်ခြင်း” ကိုလှုံ့ဆော်သည်။ လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူတွင်ထင်ဟပ်သည် (Mahler and Berridge, 2009; Robinson & Berridge, 2013) ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကဆုလာဘ်ကိုယ်တိုင်ကကဲ့သို့တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူး။ သာဓကအားဖြင့်အိမ်မွေးမြူငုံးများသည်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးရရှိနိုင်လျှင်ပင်ယခင်ကအမျိုးသမီးငုံး (UCS) နှင့်ကူးစက်ရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်တွဲဖက်သည့် terrycloth အရာဝတ္ထု (CS) နှင့်လိုလိုလားလားကူးစက်နိုင်ခဲ့သည် (Cetinkaya and Domjan, 2006)
IST အရစွဲလမ်းမှုသည်အလိုရှိမှုတိုးလာခြင်း (cue-relativity reactivity မြင့်တက်ခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ LPP ပိုမိုမြင့်မားခြင်း) နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်း (လျော့နည်းလာသောဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဓာတ်ပြုခြင်း၊ ဥပမာအနိမ့် LPP) များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ IST မူဘောင်အတွင်းရှိအချက်အလက်များကိုအနက်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်သုတေသီများသည် cue-related“ wanting” နှင့်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သော“ liking” တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖယ်ထားရမည်။ ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်သည့်နမူနာပုံစံများသည်သီးခြားအချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် (ဥပမာ - Flagel et al, 2011; Sescousse, Barbalat, Domenech, & Dreher, 2013; Gola, Miyakoshi, & Sescousse, 2015) ။ Prause et al ။ (2015) အစားဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Non- လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရာတစ်အများကြီးအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း, ကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းတွင် IST ရှုထောင့်မှအရေးကြီးသောမေးခွန်းမှာ - လိင်ပုံရိပ်တွေတွေကို (CS) သို့မဟုတ်ဆုလာဘ် (UCS) ၏အခန်းကဏ္ဍပါသလား ထို့ကြောင့်: အဆိုပါတိုင်းတာ LPP "လို" သို့မဟုတ် "အကြိုက်" ရောင်ပြန်ဟပ်သနည်း?
စာရေးသူများအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များသည်အကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီး LPP ကိုလျော့နည်းသွားစေသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအရလျော့ကျသွားသော“ လိုချင်ခြင်း” ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ လျော့နည်းသွားသော“ လိုချင်မှု” များသည် IST စွဲပုံစံနှင့်မကိုက်ညီပါ။ သို့သော်လေ့လာမှုများစွာကလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများသည်အကြောင်းအရာများမျှသာမဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိသည် (Oei, Rombouts, Soeter, van Gerven, & Both, 2012; Stoléru, Fonteille, Cornélis, Joyal, & Moulier, 2012; ပြန်လည်သုံးသပ် - Sescousse, Caldú, Segura, & Dreher, 2013; Stoléru) et al ။ , 2012) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ventral striatum (ဆုလာဘ်စနစ်) လှုပ်ရှားမှု (Arnowet al, 2002; Demos, Heatherton, & Kelley, 2012; Sabatinelli, Bradley, Lang, Costa, & Versace, 2007; Stark et al ။ , 2005; Wehrum-Osinskyet) al ။ , 2014), dopamine ဖြန့်ချိ (Meston နှင့် McCall, 2005) နှင့် Self- အစီရင်ခံနှင့်ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျတိုင်းတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနှစ် ဦး စလုံး (ပြန်လည်သုံးသပ်: Chivers, Seto, Lalumière, Laan, & Grimbos, 2010) ။
လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်ပင်ရင်း (ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအစာကဲ့သို့သော) လိင်အဓိကအားဖြင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ထိုကဲ့သို့ပင်ကိုသဘာဝကျသောအကျိုးကိုငြင်းပယ်လျှင်ပင် Pavlovian သင်ယူမှုကြောင့်ထူးခြားလှသောလှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်သည်။ သဘာဝအခြေအနေများအရအမြင်အာရုံဆိုင်ရာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (ဥပမာအဝတ်အချည်းစည်းအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကဲ့သို့) သည်လိင်မှုကိစ္စအတွက်လိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက် cue (CS) ဖြစ်နိုင်သည်။ အထွတ်အထိပ်လိင် (သို့) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစားသုံးမှုနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိစ္စတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (CS) သည်အော်ဂဇင် (UCS) နှင့်ပြင်းထန်စွာဆက်နွယ်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည် (UCS; Mahler and Berridge, 2009; Robinson & Berridge, 2013) နှင့်ထို့နောက်ချဉ်းကပ်ရန် ( ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်း) နှင့်အဆုံးသတ်အပြုအမူများ (ဥပမာ - အထွတ်အထိပ်သို့မရောက်မီကြည့်ရှုခြင်းနာရီ) ။
ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နှင့်သင်ယူရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များသည်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်နေသည်ဟုလေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်လူသားများအတွက်ပင်ရင်းဆိုင်ရာ hedonic တန်ဖိုးများရှိသည် (Prévost, Pessiglione, Météreau, Cléry-Melin, & Dreher, 2010) အပြင် rhesus macaques (Deaner, Khera, & Platt, 2005) ။ သူတို့၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောတန်ဖိုးကိုပင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ Prause et al ။ ၏ (၂၀၁၅) လေ့လာမှုအရအထွတ်အထိပ်အတွေ့အကြုံ (သဘာဝ UCS) ကိုမရရှိနိုင်သောနေရာ၊ (ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမပြုရန်ညွှန်ကြားထားသည်၊ p ။ 2015) ။ Berridge ၏အဆိုအရအလုပ်အခြေအနေသည်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည် (Berridge, 197) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာပုံများ မှလွဲ၍ အခြားအပျော်အပါးများမရနိုင်သောကြောင့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်ရိုးရိုးသာလွန်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များအတွက် LPP လျော့နည်းသွားစွဲမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်
အထက်ဖော်ပြပါအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး Prause et al ရှိလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည်။ (2015) လေ့လာမှု, အစားတွေကိုဖြစ်ခြင်း၏အစား, ဆုလာဘ်၏အခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ သို့ဆိုလျှင် IST မူဘောင်အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမဟုတ်သောရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သည့်ရုပ်ပုံများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြင်းထန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် LPP လျှော့ချခြင်းသည်အမှန်တကယ်တွင်ကျဆင်းသွားသည့်“ နှစ်သက်မှု” ကိုထင်ဟပ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရလဒ် Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင် (; ရော်ဘင်ဆင် et al, 2012 Berridge, 2015) ကအဆိုပြုစွဲစွဲမော်ဒယ်နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် IST မူဘောင်အတွင်းစွဲယူဆချက်ကိုအပြည့်အဝအတည်ပြုရန်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောစမ်းသပ်လေ့လာမှုများ၊ Sescousse, Redouté, & Dreher (2010) မှလောင်းကစားသူများနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများတွင်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်စံနမူနာပြစံနမူနာကောင်းကိုနမူနာပြခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ငွေကြေးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ (သင်္ကေတဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု) နှင့်ရှင်းလင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများ (ငွေကြေးဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာပုံများ) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Prause et al အတွက်ကောင်းစွာသတ်မှတ်အချက်များနှင့်ဆုလာဘ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (2015) လေ့လာမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများ၏အခန်းကဏ္uncleကိုမသိရသေးဖြစ်နေဆဲထို့ကြောင့်ရရှိသော LPP အကျိုးသက်ရောက်မှု IST မူဘောင်အတွင်းစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ကြသည်။ လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသော“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များဖြင့်ပြသနာများကိုအသုံးပြုသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများသည် IST နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
ကျွန်တော်အခြားလူကြိုက်များစွဲမော်ဒယ်ယူလျှင် - Deficency Syndrome (။ RDS; Blum et al, 1996, 2015) ၌ဆပ်စာရေးသူအားဖြင့်ရရှိသောဒေတာများတကယ်စွဲအယူအဆ၏မျက်နှာသာအတွက်ပြော၏။ RDS ဘောင်-အလုပ် (လျော့နည်းသွား BOLD နှင့် electrophysiological reactivity ကိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို) အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် dopaminergic တုံ့ပြန်မှုကိုလျှော့ချရန်မျိုးဗီဇအာရုံ-ရှာ, Impulse နှင့်စွဲလမ်း၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းယူဆတယ်။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်အနိမ့် LPPs ၏စာရေးဆရာများ '' တွေ့ရှိချက် RDS စွဲမော်ဒယ်နှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီသည်။ Prause et al လျှင်။ (2015) IST သို့မဟုတ် RDS ထက်လျော့နည်းလူသိများအချို့နဲ့အခြားမော်ဒယ်စမ်းသပ်ခဲ့ကြ, ကသူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်ခေတ္တဆက်ဖို့အလွန်အမင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Prause et al အားဖြင့်လေ့လာမှု။ (2015) ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့ data တွေကိုကယ်တင်တတ်၏။3 အဆိုပါတင်ပြရလဒ်များကိုဆန့်ကျင်, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအယူအဆ၏မကျြနှာ၌ရှိကြ၏လျှင်သေး, ကြောင့်စွဲမော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီးသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းအယူအဆကြေညာချက်မရှိခြင်းနှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးစမ်းသပ်ပါရာဒိုင်း (ခဲယဉ်းခေါ်ဆောင်သွားပုံအခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်မှ) ၎င်းထိုသို့ပြောမဖြစ်နိုင်ပါ "ညစ်ညမ်းစွဲ။ " ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ယူဆချက်နှင့်အတူပိုမိုအဆင့်မြင့်သောလေ့လာမှုများအဘို့ဟုခေါ်ကြသည်။ Prause et al ၏ကံမကောင်းစွာဟာရဲရင့်ခေါင်းစဉ်ကို။ (2015) ဆောင်းပါးပြီးသား, အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်4 အရှင်သိပ္ပံနည်းကျမတရားမှုဖွနိဂုံးချုပ်ကိုလူသိများ။ ကြောင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှု၏ခေါင်းစဉ်၏လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရေးပါမှုရန်, သုတေသီများ သာ. ကြီးမြတ်သတိနဲ့အနာဂတ်ကောက်ချက်ဆွဲသင့်ပါတယ်။
3 ဒါဟာ Prause et al အတွက်သတိထားမိဖို့ထိုက်တန်သည်။ (2015) ပြဿနာသည်အသုံးပြုသူများ 3.8 ဇ / ရက်သတ္တပတ် (SD က = 1.3) အတွက်ပျမ်းမျှအားအတွက်ညစ်ညမ်းလောင်နီးပါးပျမ်းမျှအား 2014 ဇ / ရက်သတ္တပတ် (SD က = 4.09) တွင်လောင်တဲ့သူKühnနှင့် Gallinat (3.9) တွင် Non-ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် ။ Voon et al ၌တည်၏။ (2014) ပြဿနာသည်အသုံးပြုသူများ 1.75 ဇ / ရက်သတ္တပတ် (SD က = 3.36) သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်ပြဿနာ 13.21 ဇ / ရက်သတ္တပတ် (SD က = 9.85) - မေလ 2015 အတွက်အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံညီလာခံကာလအတွင်း Voon အားဖြင့်တင်ပြဒေတာ။
4 Prause et al အကြောင်းကိုလူကြိုက်များသိပ္ပံဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်၏ဥပမာများ။ (2015): "Porn သည်အခြားစှဲကဲ့သို့အန္တရာယ်မဖြစ်, လေ့လာမှုမလုပ်ပဲ" (http://metro.co.uk/2015/07/04/porn-is-not-as-harmful-as-other-addictions- လေ့လာ-တောင်းဆိုမှုများ-5279530 /), "သင်၏ Porn စွဲရီးရဲလ်သည်မဟုတ်" (http://www.thedailybeast.com/articles/2015/06/26/your-porn-addiction-isn-t-real.html) "Porn '' စွဲ '' တကယ်ပဲစွဲ, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ပြောသည်မဟုတ်" (http://www.huffingtonpost.com/2015/06/30/porn-addiction- n7696448.html)
Arnow, BA, Desmond, je, Banner, LL, Glover, GH, Solomon, A. , Polan, ML ။ ။ ။ & Atlas, SW (2002) ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦး နှောက်, 125 (PT ။ 5), 1014-1023 ။
Berridge, KC (2012) ။ ဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှု၏ mesolimbic တွက်ချက်မှု: ခန့်မှန်းအမှားထဲကနေမက်လုံးပေး salience ရန်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, 35 ၏ဥရောပဂျာနယ် (7), 1124-1143 ။ http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9568.2012.07990.x
Wood, RC၊ Braverman၊ ER၊ Chen၊ TJ, Cull, JG, & Comings, DE (1996) ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ syndrome ရောဂါတစ်ခုဆုံးအဖွတျအဖြစ် D2 dopamine အဲဒီ receptor ဗီဇ။ ဆေးပညာတော်ဝင် Society ၏ဂျာနယ်, 89 (7), 396-400 ။
Blum, K. , Badgaiyan, RD, & Gold, MS (2015) ။ Hypersexuality စွဲနှင့်ဆုတ်ခွာ: phenomenology, neurogenetics နှင့် epigenetics ။ Cureus,7(7), e290 ။ http://dx.doi.org/10.7759/cureus.290
Cetinkaya, အိပ်ချ်, & Domjan, အမ် (2006) ။ ငုံးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ fetishism (Coturnix japonica) မော်ဒယ်စနစ် - မျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုစမ်းသပ်ခြင်း။ နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 120 (4), 427-432 ။ http://dx.doi.org/10.1037/0735-7036.120.4.427
Chivers, ML, Seto, MC, Lalumière, ML, Laan, E. , & Grimbos, T. (2010) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့တွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါ၏လိင်အင်္ဂါဆိုင်ရာအစီအမံများသဘောတူခြင်း - meta-analysis ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39 (1), 5-56 ။ http://dx.doi.org/10.1007/s10508-009-9556-9
Cooper က, အေ, Scherer, CR, Boies, SC, & ဂေါ်ဒွန်, BL (1999) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်မှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမှရောဂါဗေဒဖော်ပြချက်။ Professional ကစိတ်ပညာ: သုတေသနနှင့်အလေ့အကျင့်, 30 (2), 154. ထံမှရယူရန်။ http://psycnet.apa.org/journals/pro/30/2/154/
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက် - ထောင်စုနှစ်သစ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ မှရယူရန် http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cpb.1998.1.187
Deaner, RO, Khera, AV, & Platt, ML (၂၀၀၅) ။ မျောက်များတစ် ဦး လျှင်တစ် ဦး ပေးရသည်။ လက်ရှိဇီဝဗေဒ, 2005 (15), 6-543 ။ http://dx.doi.org/548/j.cub.10.1016
Delmonico, DL, & Carnes, PJ (1999) ။ Virtual Sex စွဲလမ်းမှု - Cybersex သည်ရွေးချယ်ရမည့်ဆေးဖြစ်လာသည်။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ ၂ (၅)၊ ၄၅၇-၄၆၃ ။ http: //dx.doi.org/2/cpb.5
Demos, KE, Heatherton, TF, & Kelley, WM (2012) ။ နျူကလိယတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုသည်လှုပ်ရှားမှုကိုအစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကအလေးချိန်တိုးလာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအားကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 32 (16), 5549-5552 ။ http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5958-11.2012
Flagel, SB, Clark က, JJ, ရော်ဘင်ဆင်, TE, Mayo, အယ်လ်, Czuj, အေ, Willuhn, ဗြဲ။ ။ ။ & Akil, အိပ်ချ် (2011) ။ လှုံ့ဆော်မှု - ဆုသင်ယူမှုအတွက် dopamine များအတွက်ရွေးချယ်အခန်းကဏ္။ ။ သဘာဝ, 469 (7328), 53-57 ။ http://dx.doi.org/10.1038/nature09588
Gola, အမ်, & Potenza, အမ် (2016) ။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကို Paroxetine ကုသမှု - အဖြစ်အပျက်စီးရီး။ စာနယ်ဇင်းအတွက်အမူအကျင့်စွဲ၏ဂျာနယ်။
Gola, အမ်, Miyakoshi, အမ်, & Sescousse, G. အ (2015) ။ လိင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင် ventral striatum နှင့် amygdala reactivity အကြားဆက်စပ်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 35 (46), 15227-15229 ။
Gola, အမ်, Lewczuk, K. , & Skorko, အမ် (2016) ။ အဘယ်အရာကအရေးကြီးသည် - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအရေအတွက်သို့မဟုတ်အရည်အသွေး? ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်, 13 (5), 815-824 ။
Häggström-Nordin, အီး, Tydén, တီ, Hanson, U. , & Larsson, အမ် (2009) ။ ဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများနှင့်အတွေ့အကြုံများ။ သန္ဓေတားခြင်းနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ဥရောပဂျာနယ်, 14 (4), 277-284 ။ http://dx.doi.org/10.1080/13625180903028171
Hald, GM က (2006) ။ ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 35 (5), 577-585 ။ http://dx.doi.org/10.1007/s10508-006-9064-0
Kühn, အက်စ်, & Gallinat, ဂျေ (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု - porn ပေါ်ရှိ ဦး နှောက်။ JAMA စိတ်ရောဂါကုသမှု, 71 (7), 827-834 ။ http://dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.93
Kraus, SW, Potenza, MN, Martino, အက်စ်, & Grant, JE (2015) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများ၏နမူနာတွင် Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.02.007
Mahler, SV, & Berridge, KC (2009) ။ ဘယ်ဟာကိုလိုချင်လဲ ဗဟို amygdala opioid ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းကဆုလာဘ်အချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအလေးထားသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 29 (20), 6500-6513 ။ http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3875-08.2009
Meston, CM, & McCall, KM (2005) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်သောနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အမျိုးသမီးများအတွက်ရုပ်ရှင် - သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့ Dopamine နှင့် norepinephrine တုံ့ပြန်မှု။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 31 (4), 303-317 ။ http://dx.doi.org/10.1080/00926230590950217
Oei, NY, Rombouts, SA, Soeter, RP, vanGerven vanGerven, JM, & နှစ် ဦး စလုံး, အက်စ် (2012) ။ Dopamine သည်လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုမသိစိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်စနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုပြင်သည်။ Neuropsychopharmacology, 37 (7), 1729-1737 ။ http://dx.doi.org/10.1038/npp.2012.19
အီး, Cléry-Melin, ML, & Dreher, JC (2010) ။ နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အားထုတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်သီးခြားတန်ဖိုးဖြတ်မှုစနစ်ခွဲခြားခြင်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 30 (42), 14080-14090 ။ http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2752-10.2010
ဂုဏ်ယူပါတယ်, N. , သံမဏိ, VR, Staley, C တို့, Sabatinelli, D. , & Hajcak, G. အ (2015) ။ ပြproblemနာများရှိသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှနောက်ကျသောအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာများကိုမော်ဂျူလာနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်မကိုက်ညီသောထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ထားသည် ဇီဝစိတ်ပညာ, 109, 192-199 ။ http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2015.06.005
ရော်ဘင်ဆင်, TE, & Berridge, KC (1993) ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization သီအိုရီ? ဦး နှောက်သုတေသန။ ဦး နှောက်သုတေသနသုံးသပ်ချက်များ, 18 (3), 247-291 ။
ရော်ဘင်ဆင်, MJ, & Berridge, KC (2013) ။ သင်ယူရွံ၏စိတ်ခံစားမှုလိုသို့ချက်ချင်းအသွင်ပြောင်း။ လက်ရှိဇီဝဗေဒ, 23 (4), 282-289 ။ http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.01.016
ရော်ဘင်ဆင်, MJ, Fischer, AM, Ahuja, အေ, Lesser, EN, & Maniates, အိပ်ချ် (2015) ။ လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၏အခန်းကဏ္: များ - အစားအစာကိုလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံတွင်လက်ရှိခေါင်းစဉ်များ၊ http://dx.doi.org/10.1007/7854 2015 387
Rothman, EF, Kaczmarsky, C, Burke, N. , Jansen, အီး, & Baughman, အေ (2014) .Without porn ။ ။ ။ ယခုငါသိသောအရာဝတ္ထုတစ်ဝက်ကိုမြို့ပြ၊ ဝင်ငွေနည်းသော၊ လူမည်းနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်လူငယ်များအကြားတွင်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလေ့လာမှုကိုအသုံးပြုသည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 1-11 ။ http://dx.doi.org/10.1080/00224499.2014.960908
Sabatinelli, D. , Bradley, MM, Lang, PJ, Costa, VD, & Versace, အက်ဖ် (2007) ။ salience ထက်အပျော်အပါးသည်လူ့နျူကလိယ accumbens နှင့် medial prefrontal cortex ကိုသက်ဝင်စေသည်။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်, 98 (3), 1374-1379 ။ http://dx.doi.org/10.1152/jn.00230.2007
Sabina, C တို့, Wolak, ဂျေ, & Finkelhor, D. (2008) ။ လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်။ Cyberpsychology နှင့်အပြုအမူ, 11 (6), 691-693 ။ http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2007.0179
Sescousse, G. အ, Redouté, ဂျေ, & Dreher, JC (2010) ။ လူ့ orbitofrontal cortex အတွက်ဆုတန်ဖိုးကို coding ၏ဗိသုကာ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 30 (39), 13095-13104 ။ http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3501-10.2010
Sescousse, G. အ, Barbalat, G. အ, Domenech, P. , & Dreher, JC (2013) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဆုအမျိုးမျိုး၏ sensitivity ကိုအတွက်မညီမမျှ။ ဦး နှောက်, 136 (Pt.8), 2527-2538 ။ http://dx.doi.org/10.1093/brain/awt126
Sescousse, G. အ, Caldú, X တို့မှာ, Segura, ခ, & Dreher, JC (2013) ။ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆုလာဘ်များထုတ်ယူခြင်း - လူ့လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ neuroimaging လေ့လာမှုများကိုအရေအတွက် meta-analysis နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 37 (4), 681-696 ။ http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.02.002
Stark, R. , Schienle, အေ, Girod, C တို့, ဝေါလ်တာ, ခ, Kirsch, P. , Blecker, C တို့။ ။ ။ & Vaitl, D. (2005) ။ ဦး နှောက်၏ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု - ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်လှုံ့ဆော်သောရုပ်ပုံများ။ ဇီဝစိတ်ပညာ, 70 (1), 19-29 ။ http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.11.014
သံမဏိ, VR, Staley, C တို့, Fong က, တီ, & Prause, N. (2013) ။ လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှရရှိသော neurophysiological response များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ လူမှုဗေဒအာရုံကြောသိပ္ပံ & စိတ်ပညာ, 3, 20770. http://dx.doi.org/10.3402/snp.v3i0.20770
Stoléru, အက်စ်, Fonteille, V. , Cornélis, C တို့, Joyal, C တို့, & Moulier, V. (2012) ။ ကျန်းမာသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis ။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 36 (6), 1481-1509 ။ http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.03.006
Voon, V. , မှဲ့, တီဘီ, Banca, P. , ပေါ်တာ, အယ်လ်, မောရစ်, အယ်လ်, မစ်ချယ်, အက်စ်။ ။ ။ & Irvine, အမ် (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ သိပ္ပံပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်၊ ၉ (၇)၊ e9.http: //dx.doi.org/7/journal.pone.102419
Wehrum-Osinsky, အက်စ်, Klucken, တီ, Kagerer, အက်စ်, ဝေါလ်တာ, ခ, Hermann, အေ, & Stark, R. (2014) ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏တည်ငြိမ်မှုဒုတိယတစ်ချက်မှာ။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်, 11 (11), 2720-2737 ။ http://dx.doi.org/10.1111/jsm.12653
Wierzba, အမ်, Riegel, အမ်, Pucz, အေ, Lesniewska, Z. , Dragan, ဒဗလျူ, Gola, အမ်။ ။ ။ & Marchewka, အေ (2015) ။ Nencki ထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (NAPS ERO) အတွက်လိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားခြင်း - လိင်ဆိုင်ရာလိင်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ စိတ်ပညာ, 6, 1336 အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။
ဝဲလ်ဖလင်၊ ကေ၊ မော့ဆင်၊ စီပီ၊ ဒူဗင်၊ အီး၊ အဲလ်ဘရက်ခ်၊ ယူ။ ဂရူဆာ၊ အမ်၊ ဖလို၊ အိပ်ချ် (၂၀၁၁) ။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်မကစားခြင်းသည်တပ်မက်ခြင်းနှင့်ထပ်မံသက်ရောက်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည် - ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ ဇီဝစိတ်ပညာ, 2011 (87), 2-275 ။ http://dx.doi.org/281/j.biopsycho.10.1016